Ụdị Semalt: Ụdị Egwuregwu Dị Iche Iche Na-emetụta E-Ahịa
Ndị omempụ na-adọrọ mmasị na ụzọ nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ ha na-ejeebe zuru oke na-eduzi wayo. Kemgbe afọ 2013, ọnụahịa e-commerce na-arịwanye elu site pasent 19 na nke ahụ maka $ 100, 5.65cents gaa ndị omempụ - en ucuz gainer.
Isiokwu na-esonụ, Max Bell, nke Ọkachamara Onye Ahịa Nlekọta Ndị Ahịa, na-akọwa ụdị ịghọ aghụghọ e-azụmahịa.
Ebe a na-ezu ohi
Ha na-akọ maka 71%, 66% phishing, na 63% na-ezu ohi akaụntụ. Ndị na-awakpo yakaadị akwụmụgwọ ezubere iche. Ihe mgbaru ọsọ ebe a bụ ịmepụta azụmahịa ndị nwere njirimara dị iche iche dịka ịbịara ọhụrụ na njirimara ọhụrụ dị egwu.Ndị aghụghọ na-elele ozi nkeonwe, nke na-enyere ha aka iduzi azụmahịa ndị a n'Ịntanet. Phishing bụ usoro e ji mee iheazụ maka ozi ahịa sitere na weebụsaịtị. Pharming bụ usoro nke onye na-awakpo manipulata ebe nrụọrụ weebụ iji nye ndị ahịa akanyere ebe nrụọrụ weebụ, site na ebe okwuntughe ha jiri mee ihe iji mee ka onye mmadụ mara. Mmegide na-enye ndị e-azụmahịa enye, naiji malware mee ihe na ebe nrụọrụ weebụ na-abanye n'ime ụdị a. Mkparịta ụka mmadụ na-abanye na-abawanye ọgaranya ma na-agụnye ịba ụbadata site na iziga nkwurịta okwu n'etiti ebe nrụọrụ weebụ na onye ahịa.
Fraud enyi na enyi
N'ebe a, ndị ahịa na-aha maka ngwongwo ma jiri ụdị nke ịkwụ ụgwọ "dịka"ndepụta ego, ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Ha na-ebido ebubo ebubo na ebubo ha ma ọ bụ zuo ha. Ụdị ndị anke ndị ahịa na-akwụghachi ụgwọ na-ezighị ezi, ma na-edebe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ na-aga n'ihu na mbigharị nke onye ahịa anaghị emechoro ịchọta adreesị ahụ ha maka nnyefe. Kama nke ahụ, ha na-eji ndị na-agbakwunye ndị na-eji nkọwa ha enweta ngwaahịa..
Fraud dị ọcha
N'okwu a, onye na-eji ihe eji egwu eji eji kaadị akwụmụgwọ eme ihe, mana ha na-ejikwankọwa nke azụmahịa iji zere usoro nchọpụta aghụghọ. Ndị aghụghọ na-achọ nyocha ọrụ aka ime ụdị anke wayo. Ọ chọrọ ịmụta otú usoro nchọpụta si arụ ọrụ, na ọtụtụ ihe gbasara ndị nwe nke kaadị akwụna. Ha na-eji nke aezi ozi iji ghọgbuo usoro. Tupu ha arụ ọrụ ọrụ aghụghọ na-aga nke ọma, ha aghaghị ịnwale kaadị iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ.
Onye nwere ike iji usoro mgbochi zuru ezu ma ọ bụ nweta ezigbo ndị mmadụ ịbanye dịka ndị ahịaeji akaụntụ ụgha. Ebumnuche bụ ịnakọta ego dị ka ha nwere ike site na mmemme mmekọ site na ịmegharị okporo ụzọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ makaụdị edemede.
Ụgha nke Triangulation
Ọ gụnyere usoro atọ. Nke mbụ bụ ịmepụta onyinye na-adịghị mmaọnụ ahịa dị ala na ngwaahịa dị elu. Nzọụkwụ nke abụọ bụ iji data data kaadị akwụmụgwọ zuru ezu na iji aha ndị gbakọtara na akwụmụgwọ ndị akaadị, na-azụta ihe n'aka ụlọ ahịa. Ha na-ejide n'aka na ị ga-enye onye ahịa ahụ ngwaahịa ahụ iji jide n'aka na ị kwadoro na ịzụta mbụ.N'ikpeazụ, fraudster na-eji ozi sitere na kaadị ohi iji meekwu ihe ịzụrụ.
Ụdị aghụghọ a bụ ihe doro anya: fraudster na-enye ngwongwo na ọnụ ala,ma ọ dịghị ebugara ha onye ahịa. Otú ọ dị, ha na-akwụ ụgwọ ma ọ bụghị iche iche ụdị ịkwụ ụgwọ.
More Fraud International
Ejighị usoro aghụghọ bụ njedebe bụ enweghị usoro nke jikọtara ọnụ iji nye otu ihelelee azụmahịa niile e mere na mba 14, na ahịa dị iche iche. 52% ele mmalite ụba dịka ihe ịma aka dị ịrịba ama,na ọnụ ọgụgụ yiri nke ahụ amaghị ngwaọrụ ndị ha nwere maka igbochi imebi iwu. Oghere asụsụ na-egbochi njikwa nke usoro aghụghọmba, na maka ndi mmadu.
Ngwaọrụ dị iche iche
Ụgha na-egosi na ọ bụ ihe ịma aka nye onye ahịa ọ bụla. Otú ọ dị, ka ha na-enyocha aotutu ndi ahia ahia, ihe egwu ga adi ike. Ndị na-elekọta ndị ọzọ nke atọ na-eduga ọrụ mmemme, tinyere ekwentị mkpanaaka,na n'ikpeazụ, weebụsaịtị ndị ahịa.